मेरो कलम | Page6of 10 |
– आफन्तहरु विदेशमा छन् । दैनिक लामो समयसम्म फोन भईरहन्छ । सन्चो विसन्चो के छ वुझ्नको लागी पनी दैनिक फोन गर्नु पर्ने वाध्यता छ । उता दैनिक ठुलो धनराशी …
‘प्रकटकुमार शिशिर’~ स्मोक मेसिनबाट उडेको धुँवाले पुरै कोठा कुहिरो लागेजस्तै बनाएको थियो । रंगीन प्रकाशले उनको वक्षस्थल घरी देखिने र घरी छोपिने क्रम भएको थियो । ‘तेरा प्यार प्यार …
– तपाईलाई डिभी परेकै हौ ? ओहो डिभी परेपछि त अमेरिका जान पाईने भईयो भनेर निकै खुसी हुनुहुन्छ होला हैन ? सामाजिक सञ्जाल (फेसवुक ट्वीटर) मा शुभकामना आईरहेको होला …
– हाम्रो दैनिकी नै फेसवुकमै छ । विहानको चियामा चिनी कम भएको देखी बेलुकाको भातमा ढुङ्गा भेटिएको सम्मको कुरा फेसवुकमै गरिरहेका हुन्छौ । कसले के गदैछ, को कस्तो प्रकृतीको …
– दैनिक ईन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने तपाईको लागी गुगल भन्या के भन्ने कुरै भएन । हामीलाई जत्तिखेर ईन्टरनेटमा केहि कुरा खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालै गुगल गरिहाल्छौ अर्थात गुगलमा सर्च गर्ने …
दुईचार वर्षदेखी नै फेसवुक चलाउदै आउनुभएको छ । फेसवुकमा फोटाहरु धेरै नै अपलोड भईसक्यो । फेसवुकमा फोटो अपलोड गरेर राख्नु भनेको आवश्यक परेको समयमा काम टार्नको लागी तुरुन्तै पाईहाल्नुपनी …